ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူထုဟာ ပြင်းထန်ရက်စက်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်တာကို ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံခဲ့ပါတယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘင်္ဂလီ အိမ်တွေနဲ့ မှားပြီး ဖျက်လိုက်တာပါ ၊ ဦးထွန်းလှိုင် (RNDP)
အန္တရာယ်ပေးမယ့် အရိပ်လက္ခဏာများ »
ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူထုဟာ ပြင်းထန်ရက်စက်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်တာကို ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်
ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူထုဟာ ပြင်းထန်ရက်စက်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်တာကို ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံခဲ့ပါတယ် The Guardian – “Burma’s junta admits deadly attacks on Muslims”
ဂြိုလ်တုစလောင်းမှ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံတွေက အလွန်တရာမှ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ပြင်းထန်ရက်စက်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလှိုင်းလုံးကြီးခုဟာ ကမ်းရိုးတန်း မြို့လေးကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီးသွားတဲ့အခါ လူ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးစေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကလည်း သူ့ရဲ့နိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူထုဟာ မမျှော်မှန်းနိုင်လောက်အောင် မကြုံစဖူး ပြင်းထန်ရက်စက်လှတဲ့ ပစ်မှတ်ထားအကြမ်းဖက်တိုက်
ခိုက်တာကို ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ၀န်ခံပြောကြားချက်ဟာ ကမ်းရိုးတန်းမြို့လေးကို စိတ်ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ဘယ်လောက်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဂြိုလ်တုစလောင်း ဓာတ်ပုံတွေ ထွက်လာပြီးနောက်မှာ တဆက်တည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံတွေမှာဆိုရင် မွတ်စလင်လူထုတရပ်လုံး မဟုတ်ရင်တောင် အများစုကြီးဟာ အိမ်ခြေတွေ ဖျက်ဆီးခံရပြီး နေရာမှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရတာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Human Rights Watch အဖွဲ့က စုဆောင်းခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက် ကမ်းရိုးတန်းမြို့လေးဖြစ်တဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့ကို ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အခြေအနေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 14.4 ဟက်တာ( 35 ဧက ) လောက်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီ့ အဖျက်ဆီးခံ နေရာတွေမှာ အခြို့သော အဆောက်အဦး 811 လုံးလောက်နဲ့ လှေပေါ်အိမ်ခြေတွေလည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ပြသနေပါတယ်။
ဒီ ဓာတ်ပုံတွေက အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ၂၄ နာရီပတ်လုံးဖြစ်သွားတဲ့ ၃ ရက်တိုင် ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြီးမှာ အလွန်တရာ ကြီးမားရက်စက်ပြင်းထန်လှတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု အစီရင်ခံစာတွေကို သေချာစေပါတယ်။
ဒီ အာရကန်ဒေမှာ (ရခိုင်လို့လည်းခေါ်ပါသည်) ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဟာ လူထောင်ပေါင်းများစွာကို နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးစေခဲ့ရတဲ့ အာရကန် လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေက မွတ်စလင်တွေအပေါ် အကြီးအကျယ် သေကြေပျက်ဆီးဆှုံးရှုံးစေရန် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် သိသာထင်ရှားစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်စိန်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း ရွာတော်တော်များများ ရွာလုံးကျွတ်နဲ့ တခြို့မြို့တွေပါ မီးလောက်တိုက်သွင်း ဖျက်ဆီးခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက ပထမဆုံးသေဆုံးသူ 112 ယောက်ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ နောက်မှ 67 ယောက်ပဲ ရှိတာပါလို့ လျှော့ချ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်စိန် ရဲ့ ပြောကြားချက်ဟာလည်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီးမွန်းရဲ့ ပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ ” တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်ရပ်ကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေမှုတွေအတွက် အလွန်တရာမှ အန္တရာယ်ရှိစေကြောင်း သတိပေးမှု အပြီးမှာ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ တကယ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကမှ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်အတွင်း တောက်လျှောက် လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားဆက်ဆံ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် ထားပြီး၊ အစိုးရအနေနဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခုခုကြုံတိုင်း နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချခဲ့တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကြိုးဆက်အဖြစ် ခုလို ဖြစ်ပေါ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Human Rights Watch အဖွဲ့က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ ဧရိယာထဲက အဆောက်အအုံပေါင်း 633 လုံးနဲ့၊ လှေပေါ်နေအိမ်ခြေ နဲ့ မော်တော် သမ္ဗန် ပေါင်း 178 စင်း ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဆောင်တဲ့ ကော်မတီက လုံခြုံရေးဖြည့်အင်အားစုတွေ ဖြည့်တင်းပေးဖို့နဲ့၊ ဒီ သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေသူတွေကို ဖော်ထုတ် ဥပဒေအရအပြစ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရိုက်တာ သတင်းအရ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေဟာ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ထွက်ပြေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အရေးပါတဲ့ စက်မှုဇုံတွေဈ တခြာနေရာဒေသတွေမှာပါ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ခုလို ရက်စက်ပြင်းထန်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟာ ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေရဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ဒုက္ခသည်အရေတွက်ကို အလွန်အမင်း ပြွတ်သိပ် ကြပ်ညပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး 3000 ထောင်ခန့်ဟာလည်း စစ်တွေမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို လာလို့ မရအောင် လမ်းမှာ အစိုးရစစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခံရတဲ့ အတွက် အနီးအနားက ကျွန်းတွေမှာပဲ ခုံလှုံနေရတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
Human Rights Watch အဖွဲ့ရဲ့ deputy Asia director, Phil Robertson ကလည်း အစိုးရ အနေနဲ့ ခုလို ရက်စက်ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမျိုးနွယ်စုကို အရေးပေါ် လုံခြုံရေး အကာအကွယ်တွေ ချက်ခြင်း ပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ပြောပါတယ်။
သေဆုံးမှု နှုန်းထားတွေဟာ လက်ရှိဖော်ပြနေတာတွေထက် ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပိုပြီး မြင့်မားနေနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ Human Rights Watch အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အခုလို ကွာခြားနိုင်တယ်ဆိုတာ က အစုအပြုံလိုက် အသတ်ဖြတ်ခံရလို့ ထွက်ပြေးလာရတဲ့ လူတွေနဲ့ မျက်မြင်သေတွေက ပြောကြားတာနဲ့ အစိုးရရဲ့ သေဆုံးမှုနှုန်းထားတွေကို အမြဲ တစေ လျှော့ချဖော်ပြတတ်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ ကွာခြားမှုတွေအပေါ် အခြေခံ ခန့်မှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာမျိုးနွယ်စု ဟာ နိုင်ငံမဲ့တွေအဖြစ်ရပ်တည်နေရပါတယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့ဟာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို လူဦးရေ 8 သိန်းခန့်ရှိပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့လူတွေလို့ သတ်မှတ်ထားပြီး တရားဝင် တိုင်းရင်းသား 135 မျိုးထဲမှာ မပါဘူးလို့ ပြောဆိုနေပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကလည်း ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့က မောင်းထုတ်ခံရတဲ့ မွတ်စလင်အများစုကတော့ ရိုဟင်ဂျာမျိုးနွယ်စုတွေ မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု တရားဝင် တိုင်းရင်းသား 135 မျိုးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကမန်တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုမျိုးနွယ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် လို့ the Rohingya advocacy group, Arakan Project ရဲ့ Director Chris Lewa က ပြောပါတယ်။
ခုလက်ရှိ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုချည်း ဦးတည်နေတာ မဟုတ်ဘဲ မွတ်စလင်တွေအားလုံးကို ဦးတည်နေတာဖြစ်တယ်လို့ လည်း Lewa က ပြောပါတယ်။
This entry was posted on November 26, 2012 at 9:36 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူထုဟာ ပြင်းထန်ရက်စက်လှတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်တာကို ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်”
November 26, 2012 at 9:37 am | Reply
Burma’s junta admits deadly attacks on Muslims
Satellite images show huge swath of coastal town destroyed inawave of violence that has left dozens dead
Thousands of Rohingya Muslims are believed to have fled Kyaukpyu, on Burma’s west coast, after their homes were destroyed in the latest clashes with Buddhists. Photograph: Human Rights Watch
Burma’s president, Thein Sein, has admitted his country’s Rohingya Muslim population has been subjected to an unprecedented wave of ethnic violence. Whole villages and large sections of towns have been destroyed.
Thein Sein’s admission follows release of shocking satellite images showing the scale of the destruction in one coastal town, where most – if not all – of the Muslim population appears to have been displaced and their homes wrecked.
The pictures, acquired by Human Rights Watch, show destruction to the town of Kyaukpyu on the country’s west coast. They reveal 14.4 hectares (35 acres) of destruction, in which some 811 buildings and houseboats have been destroyed.
The images confirm reports of massive violence in the town over 24 hours around 24 October, three days after the first wave of attacks. The incidents in Arakan province – also known as Rakhine – have displaced thousands of people in what appears to have beenawave of ethnic cleansing pitting Arakan Buddhists against Muslims. “There have been incidents of whole villages and parts of the towns being burned down,” Thein Sein’s spokesman said. A government official initially put the death toll at 112 but later revised it to 67.
Thein Sein’s comments followawarning from the office of UN general secretary Ban Ki-moon that ethnic violence was endangering political progress in Burma. The latest violence in Burma comes as the government is struggling to contain ethnic and religious tensions suppressed during nearlyahalf century of military rule that ended last year. Inter-ethnic violence broke out earlier this year, triggered by the rape and murder ofaBuddhist woman by three Muslim men.
Human Rights Watch said it had identified 633 buildings and 178 houseboats and floating barges destroyed, in an area occupied predominantly by Rohingyas. A committee of MPs led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi called on Friday for security reinforcements and swift legal action against those behind the killings and destruction.
According to Reuters, dozens of boats full of Rohingyas fled Kyaukpyu, an industrial zone important to China, and other recent areas of violence and were trying to reach overcrowded refugee camps around the state capital, Sittwe.
Some 3,000 Rohingyas were reported to have been blocked from reaching Sittwe by government forces and landed onanearby island.
“Burma’s government urgently needs to provide security for the Rohingya in Arakan, who are under vicious attack,” said Phil Robertson, deputy Asia director at Human Rights Watch. “Unless the authorities also start addressing the root causes of the violence, it is only likely to get worse.”
Human Rights Watch fears the death toll may be far higher than has been given so far. Its estimates are based on allegations from witnesses fleeing scenes of carnage and the government’s history of underestimating figures.
Rohingyas are officially stateless. The government, controlled by Buddhists, regards the estimated 800,000 Rohingyas in the country as illegal immigrants from Bangladesh, and not as one of the country’s 135 official ethnic groups, and denies them citizenship. But many of those expelled from Kyaukpyu are not Rohingya but Muslims from the officially recognised Kaman minority, said Chris Lewa, director of the Rohingya advocacy group, Arakan Project. “It’s not just anti-Rohingya violence any more, it’s anti-Muslim,” Lewa said.
November 27, 2012 at 1:52 pm | Reply
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မေတ္တာတရားနဲ့ လက်ကမ်းပေးရင် မေတ္တာတရားနဲ တုံပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ပေ။ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားသူ မည်သူကိုမဆို အသေခံ ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ လည်းအဆင်သင့်ပေ။ရိုဟင်ဂျာ တွေက လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ ဝါဒကိုက ငြိမ်းချမ်းရေးပါပေ။ဆက်လက်ဖိနှိပ်ဖို့ တော့မကြိုးစားသင့်ဘူး။အကြမ်းဖက်ရခိုင်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးအားမြောက်ပြုသူ အားလုံးနှင့်သူတို၏သားစဉ်မြေးဆက်အားလုံးပျက်စီးပါစေ။